Samsung Wi-Fi Alliance kwadoro Samsung Galaxy M40 | Gam akporosis
Samsung na-akwadebe Galaxy M40: etiti etiti ahụ nwetara asambodo Wi-Fi Alliance
Ugbu a, ezinụlọ nke ngwaọrụ Galaxy M Samsung nwere ọnụọgụ atọ nke igwefoto dị n'etiti (Galaxy M10, M20 y M30), nke na-akụ ahịa ahịa India nke ọma nnabata ndị ahịa.
Iji mepụta quartet, a ga-agbakwunye ọnụ ọnụ ọzọ na setịpụrụ a, nke na-agaghị abụ onye ọzọ karịa Galaxy M40, ihe nlere nke vitamin nke Wi-Fi Alliance kpughere ụfọdụ nkọwa, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ya.
Samsung iji gbasaa ezinụlọ ezinụlọ ya kachasị ọhụrụ yana Galaxy M40
Samsung Galaxy M40 nke Wi-Fi Alliance kwadoro
Nọgide na-agbaso ọkwa ọhụụ nke Samsung ngwaọrụ abụrụla ihe ịma aka, ikwu nke kachasị. Mgbe okwuputara na eze ogologo oge Galaxy A80 na Galaxy A20 ụbọchị ole na ole gara aga, ugbu a ọ dị ka Galaxy M40 ga - abia n’elu nke usoro ya.
Ihe odide ahụ na-akọwa site na ekwentị ahụ na-egosipụta ekwentị «SM-M405F / DS», nke na-agbaso usoro mgbakọ ọnụ ọgụgụ doro anya nke ezinụlọ Galaxy M. na na-agba ọsọ A gam akporo 9.0 achịcha ma Wi-Fi a / c (2.4 GHz / 5 GHz). N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịkọ nkọ na isiokwu nke ịkọ nkọ.
N'ileghachi anya na M10, M20 na M30, o yikarịrị ka M40 ga-enye mmụba diagonal ọzọ na-abawanye ngosi karịrị 6.4 sentimita asatọ nke M30. Ọzọkwa, ịhụ otú nke ikpeazụ si dị iche na ngalaba Super AMOLED, anyị na-atụ anya na ọ dịkarịa ala maka ngwaọrụ ahụ.
Ka ị na-agụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ site na Galaxy A na M lineups, o yikarịrị ka M40 na-agbazi otu Exynos 7904 chipset sitere na M30. Ọ bụrụ na ọ dị otu a, nke a agaghị eju anyị anya ma ọlị.
Ihe ọhụrụ Galaxy S10 na Galaxy M na-enweta HDR na HD asambodo, n'otu n'otu, si Netflix
Otu ihe anyị ji n'aka bụ na Galaxy M40 na-abịa n'oge na-adịghị anyadị ka Wi-Fi asambodo usoro a ga-eme nnọọ mbubreyo ke mmepe na ntọhapụ okirikiri nke a ngwaọrụ. Oh, ma ọ bụrụ na ị chọpụtala "DS" na-apụta na njedebe nke nọmba nlereanya ahụ ma ị na-eche ihe ọ pụtara, ọ na-anọchi anya "Dual SIM."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung na-akwadebe Galaxy M40: etiti etiti ahụ nwetara asambodo Wi-Fi Alliance
Huawei FreeLace, anyị na-enyocha ekweisi Huawei kacha ọhụrụ
Otu esi ahụ ọnọdụ nke kọntaktị WhatsApp gị n'amaghị ama